Otu puku ndụ gara aga iri ato%
Ndụ asaa gara aga iri isii na otu%
Ndụ ugbu a iteghete%
%iri ato nke ụdị iwe mmadụ ga-abụrịrị n’ihi otu mmadụ siri zụlite ntụpọ omume site na ịzaghachi n’iwe n’ọnọdụ dị iche iche na ndụ otu puku gara aga.Site na-anaghị arụsi ọrụ ike n’ibelata iwe, ọ gaara abụ na-ahapụrụ ya ka ọ bawanye na-enweghị oke n’oge ndụ.
Ndụ asaa gara aga gaara atụnye %iri isii na otu ọzọ nke ụdị agwa iwe mmadụ si esiwanye ike na uche a na-amachaghị.
Ya mere, n’oge ọmụmụ na ndụ ugbu a, ntụpọ nke iwe n’ime onye ahụ ga-abụrụla ihe gbanyere nnukwu mgbọrọ. Ka mmadụ na-ebi ndụ ugbu a, a ga-enwe ụfọdụ ọnọdụ ndị onye ahụ ga-enweta nke nwere ike ikpalite onye ahụ izaghachi n’iwe, ya bụ na-akpụ ma sie ike n’ụdị ntụpọ omume. Otu ọ dị, ụdị mmeghachi nke iwe ga-apụta naanị % iteghete nke etu ntụpọ omume nke iwe si malite na onye ahụ. N’oke etiti, iri iteghete na otu % ọdịdị nke ntụpọ omume onye ọ bụla ga-abụrịrị n’ihi ndụ gara aga.